Lalam-pirenena faha-7 : tratra ireo dimilahy mpanafika taksiborosy | NewsMada
Lalam-pirenena faha-7 : tratra ireo dimilahy mpanafika taksiborosy
Tena rain-dahiny amin’ny fanakanana sy fanafihana taksiborosy, nampitondra faisana ny mpandeha amin’iny lalam-pirenena fahafito iny ireto dimilahy voasambotry ny zandary, ny alahady teo, ireto. Ankoatra ny entan’ny mpandeha, nisy basy koa tratra teny amin’izy ireo.
Sarona tamin’izy ireo ny basy “carabine” iray efa novana endrika ary nisy koa ny entana halatra tany amin’izy ireo.
Ny 4 febroary tokony ho tamin’ny 4 ora tolakandro, taksiborosy iray Sprinter, avy any Vangaindrano hiakatra ho aty Antananarivo no nisy fahasimbana ka nijanona teo Andohoany, Anjoma Nandihizana, RN7. “Tsy nampandre ny zandary na ny manam-pahefana hafa ireo mpandeha na ny mpamily momba io sampona mahazo azy ireo io na tratra maizina teo aza satria nihevitra izy ireo fa eo amin’ilay tanàna no maty ny fiara ka tsy misy atahorana”, hoy ny zandary.
Tamin’ny 9 ora sy sasany alina, jiolahy tokony ho 20 eo ho eo nanafika azy ireo, nandroba ny vola 500.000 Ar sy ny entana isan-karazany toy ny sakaosy sy finday ary lasa nandositra avy eo. Lehilahy 50 taona iray no naratra nandritra izany.
“Rehefa nandalo ny tanjozotran’ny fiara maro hianatsimo izay narahan’ireo zandary avy ao amin’ny FIGN, nitaraina ireo mpandeha ireo. Niantso ny zandary avy ao amin’ny borigady Ambatofitorahana ireo namany mpanao “escorte” ireo ka raikitra ny fanarahan-dia. Tratra tamin’izany ny lehilahy iray izay mbola nahatratrarana entan’ny mpandeha toy ny finday, sy basy. Io no nanoro ny namany hafa ka nahatrarana ireo dimy lahy”, hoy ny fanazavana.
Olona efa nihaodihaody
Raha ny nambaran’ireo voatafika, andian’olona efa nihaodihaody sy nisotro toaka teo amin’io tanàna kely nijanonan’izy ireo teo ihany ireo tratra nanafika ireo. “Ny iray tamin’ireo tratra ireo, efa nanao vava mihitsy rehefa mamomamo ka nandrahona satria nanadala tovovavy mpandeha tao anaty fiara tao izy ary tezitra rehefa tsy nanaiky azy io tovovavy io ka nilaza fa ho hitan’izy ireo tsara ny hanjo azy raha tavela eo izy ireo amin’ny alina”, hoy ny zandary. Mitohy ny fikarohana ireo jiolahy am-polony izay mbola misitrika. “Efa tsy afa-miaina malalaka izy ireo hatreto satria efa fantatra avokoa ka tsy sahy mody an-trano toy ny teo aloha”, hoy ny zandary.
“Tsiahivina fa ny filazana mialoha amin’ireo zandary ny ahiahy, mba ahafahana misoroka mialoha ny loza mety hiseho. Ampandrenesina mialoha ny fiara raha toa ka any amin’ny toerana misy jiolahy mpanafika ahafahana nandefa mpanao fisafoana, hiaro eny an-toerana”, hoy ny fanamafisana. Atolotra ny fampanoavana tsy ho ela ireo jiolahy ireo.